Fianjeran’ny vatobe teny Ampamarinana :: Mahatsiaro tena ho voarirarira ireo fianakaviana tra-boina • AoRaha
Fianjeran’ny vatobe teny Ampamarinana Mahatsiaro tena ho voarirarira ireo fianakaviana tra-boina
Mahatsiaro tena ho voarirarira ireo fianakaviana traboinan’ny fianjeran’ny vato avy eny Ambanin’Ampamarinana sy Tsimialonjafy ary Ankadilalana. Misy amin’izy ireo no rava trano tanteraka ary ao koa ireo tsy afaka miverina amin’ny trano misy azy intsony noho ny loza mitatao manodidina ny fonenany. Mitaky vahaolana maharitra amin’ny toerana tokony hametrahana azy ireo ireto farany. Efa nafindra eny amin’ny Seba Isotry ireo traboina ireo amin’izao fotoana izao raha noesorina teny amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka, omaly.
« Mbola tsy nandà ny famindrana toerana anay izahay hatramin’izay fa nanaraka ny fanjakana foana. Nanome safidy izy ireo na miverina eny amin’ny trano taloha, na manofa trano , na ho eny Isotry. Fianakaviana dimy amby folo izahay no nisafidy ho eny Isotry. Vahaolana maharitra anefa no tadiavinay satria nolazaina fa vonjimaika ihany koa ny hipetrahanay eny an-toerana », hoy Razanakoto Fidisoa, solontenan’ny mponina avy amin’ny fokontany Ambanin’Ampamarinana.
Tsiahivina fa fito volana ireo traboina ireo no nialokaloka teny amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka. Nampanantena ny hanome trano fonenana azy ireo anefa ny fanjakana. Nasaina nanangona ny antontan-taratasy rehetra mikasika ny trano nonenany hatramin’izay izy ireo mba hanomezana fonenana maharitra. «Mety hiala maina amin’izao izahay satria misy fe-potoana ihany koa ny eny Isotry. Tsy hita ilay fampanantenana nataon’ny fanjakana talohan’ny nametrahana anay teny Andohatapenaka », hoy kosa i Juliette, solontenan’ny mponina avy eny amin’ny fokontany Ankadilalana.
Niverina namonjy ny trano fonenany ny sasany ankoatra ireo nanaiky nifindra eny Isotry.
« Efa ela no niverina tsikelikely tamin’ny tranony ireo olona voasokajy tao anatin’ilay faritra mena tsy azo hiverenana intsony. Tsy nisy loatra ny vahaolana maharitra noraisin’ny fanjakana ka tsy maintsy niverina ny olona. Ny vanim-potoanan’ny fahavaratra no tena atahorana fa amin’izao tsy hisy vato hianjera mihitsy », araka ny fanampim-panazavan-dRaharison Jean Claude, lehiben’ny fokontanin’Ambanin’Ampamarinana.
Tamin’ny 8 aogositra lasa teo no nanao fitsirihana teny an-toerana ny avy ao amin’ny Birao nasionaly misahana ny loza voanjanahary (BNGRC) niaraka ny teknisianina avy ao amin’ny Ivon-toerana nasionaly fijerena ny fihetsehan’ny tany na mpandinika ny jeofizika na Ioga.
Fandaminana :: Hisy toerana ho an’ireo mpivarotra eny Soamandrakizay